Izixhobo ze-SEO-uphononongo lwezixhobo ze-SEOmoz Pro
Uvavanyo lweZixhobo ze-SEOmoz Pro
NgoLwesine, uJanuwari 13, 2011 NgoLwesihlanu, Matshi 1, 2013 Douglas Karr
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela (i-SEO) kubaluleke kakhulu kuso nasiphi na isicwangciso sokukhula kwi-Intanethi. Kuyinyani ukuba intlalontle iyi-behemoth ngaphandle, kodwa inyani kukuba malunga ne-90% yabasebenzisi be-Intanethi bayakwenza uphando olunye kwiseshoni ye-Intanethi. Yongeza loo nto kwinto yokuba umsebenzisi ophandayo osebenzayo unenjongo yokwenza isigqibo sokuthenga ixesha elininzi… kwaye uqala ngokukhawuleza ukuqaphela ukuba kutheni onke amashishini kufuneka abe nesicwangciso esibanzi se-intanethi esibandakanya ukwenziwa kweinjini yokukhangela.
Ukuba awukalithathi ixesha lokulijonga kwakhona Izixhobo ze-SEOmoz ProNdiza kukubongoza ukuba. Isimanga kukuba awudingi kuba yiPro ukuze uyisebenzise- ngokuchasene noko. Isixhobo sethuluzi sinokuthatha nabani na onomdla wokuphucula inqanaba labo kwiinjini zokukhangela kwaye abanikeze ngezixhobo ezibanzi eziyimfuneko zokwandisa iisayithi zabo kunye nokudlula ukhuphiswano. Besikhupha iipakeji zomthengi ngamnye wethu.
Abantu abahle kwi-SEOmoz basivumele ukuba sinike iakhawunti kwimibhiyozo yethu yeposti yebhlog ye-2,500-ephumeleleyo nguMack Earnhardt weAgile Reasoning. (Kukho itoni yamabhaso asekhona-qiniseka ukuba ubhalisele kwi-newsletter ngokunqakraza rhuma kwikhonkco kwintloko).
Njengombulelo kuwe, bendifuna ukubhala uphononongo olunzulu ngakumbi oluthetha kwezona zinto zinamandla ezintathu ze-SEOmoz Pro Toolset:
Ukuvavanywa kokukhangelwa kweeveki ngeveki kunye nokulandela umkhondo wenqanabaIsoftware ikhasa indawo veki nganye kwaye yazisa umsebenzisi ngemicimbi enokuthi ichaphazele ukusebenza kwinqanaba. Amagama aphambili alandelwa inqanaba kuGoogle, iBing, kunye neYahoo ngokuchasene nabantu abakhuphisana nabo.
Uhlalutyo lwekhonkco lokhuphiswanoQonda ukuba zeziphi iiwebhusayithi ezinxibelelana nabantu abakhuphisana nabo, zibanceda ukuba babe kwinqanaba elingcono. Ukujolisa kwezi ndawo ukuba zidweliswe kwaye ziphucule ukusebenza kwakho.
Ukulungiswa kwephephaUmfanekiso okhawulezayo wendlela amagama aphambili asebenza ngayo kwiphepha. Amabakala alula kunye nohlalutyo olunamaphepha oluncedo lunceda ekujoliseni ezona ndawo zinkulu zokuphucula kunye nokubonelela ngeengcebiso malunga nendlela yokuphucula iphepha.
Ukuba ujolise kubaphulaphuli useMelika kwaye ujonge ukubeka esweni, ukuhlalutya kunye nokuphucula iziphumo zakho zenjini yokukhangela, I-SEOmoz Pro sisixhobo esifunekayo.
tags: seomozseomoz izixhobo
Itekhnoloji yeNtengiso: Ifomula yeApple
Mar 1, 2011 ngo 4:17 PM
Hee uDouglas kutshanje ndithathe i-SEOmoz kwityala labo elingu-1month lasimahla I… bendikhangela nje uphononongo oluthile kwaye ndafumana le post, yinto elungileyo yokubhala! Andilifumananga ixesha lokusebenzisa iakhawunti yam okwangoku kodwa ndiza kuyenza kungekudala xa ndifuna ukwazi ukuba ndibhalise ngokusisigxina! Ukhankanya abaphulaphuli ekujoliswe kubo e-US, ndise-UK kwaye ndijolise ikakhulu e-UK nakwabanye abathengi baseYurophu nabo- ngaba oku kuya kuba luncedo kum?
Mar 1, 2011 ngo 4:57 PM
Sawubona uChester, unokufuna ukujonga i-gShiftLabs, bayakuvumela ukuba ulandele kwilizwe liphela.
Ithunyelwe ukusuka kwi-iPad yam
Mar 1, 2011 ngo 5:58 PM
Enkosi ngesindululo sokuba ndiye kujonga ngoku 🙂
Juni 26, 2011 ngo-5: 48 AM
Sawubona uDouglas, besisebenzisa i-SEOmoz Pro iinyanga ezimbalwa kunye nabathengi basekhaya kwiiPhilippines kwaye isebenza kakuhle. Andiqinisekanga ukuba kukho into endiyilahlekileyo. Unomdla wokucacisa? Enkosi!
Juni 26, 2011 ngo-6: 24 AM
Kumnandi ukuva! Xa ndizama ukuvavanya ezinye iziphumo zaseYurophu emva phaya, andifumananga lwazi lungako. Ndiza kuyinika enye into evuthuzayo!
Agasti 22, 2011 kwi-3: 36 AM
Ndizakuzama. Simahla ukuzama inyanga enye. Ke, masibone.
Epreli 29, 2012 ngo-3: 35 PM
Enkosi, olo luphononongo olunomdla
Meyi 28, 2012 kwi-10: 16 AM
Isixhobo se-SEOmoz esisetiweyo kufuneka sibenazo zonke ii-SEO kunye nabantu abazimiseleyo ngenqanaba lokukhangela kwiinjini kwaye bafuna ukuzisa iwebhusayithi yabo kwiphepha lokuqala leinjini ezinkulu zokukhangela ngokukhawuleza.
Meyi 28, 2012 kwi-6: 04 PM
Enkosi ngokwabelana ngohlolo lwakho. Nawe ibiluphononongo olulula, eli binzana landifumana: le ayisiyonto ilungileyo. Ndandisoyika ukuba ndiza kuphulukana nexesha elininzi kunye nomzamo. Enkosi!
Ndithiyile nje iindleko zabo zekhadi letyala, ndingathanda ukuhlawula ngepaypal.